I-BangEa – Inkqubo yokukhuphela isoftware yorhwebo
Phinda umisele iPaneli
Imakethi enexesha kunye nomyalelo wokulinda
Iphaneli yokuvala Imisebenzi exhasayo
Okuhle Yongeza isithuba
Okulungileyo Yongeza iLoti x
Okulungileyo Yongeza umda
Buyela umva Yongeza isithuba
Vula kwaye uvale ngokuzenzekela
Iphepha lasekhaya leForam
Zonke-site EA software simahla ukusetyenziswa
I-EA sisishunqulelo somcebisi oyingcali okrelekrele inkqubo yorhwebo oluzenzekelayo.
Inkqubo yorhwebo yesoftware.
Matshi 15, 2022
Qonda urhwebo oluzenzekelayo oluzenzekelayo lwe-engile ye-K-line
Lo ngumbuzo ophakanyiswe ngumhlobo kwiforum ye-EA BANG. Enyanisweni, lo msebenzi awudingi ukwenziwa kwisalathisi, kuba i-EA ekhoyo inokuyiqonda. Kukho iindlela ezimbini zokuphumeza oku. Yintoni ukuthambeka komgca we-k? Ngumgca owenziwe ngokudibanisa i-N […]
Februwari 28, 2022
Umahluko phakathi kwenkqubo yorhwebo EA kunye neskripthi
I-EA: Ngalo lonke ixesha ixabiso liguquguquka, ikhowudi kwi-EA iqhutywe kanye; Okushicilelweyo: Emva kokuba iskripthi siqhuba, ikhowudi iphunyezwa kube kanye kuphela. Ukuze siqonde umahluko ngokuchanekileyo, uMnu. Tang we-EA Bang wabhala ngokukodwa i-EA kunye neskripthi sokubonisa, umsebenzi wayo kukuvelisa ixesha. […]
Februwari 25, 2022
Fumana idilesi ye-IP yomncedisi wokurhweba
Le mfuneko ephakanyiswe ngumhlobo kwiforum ye-EA State ngaphambili. Usebenzise inkqubo yethu ye-EA ukurhweba rhoqo, kwaye isicwangciso sokurhweba siluhlobo lokuxubha i-oda. Sonke siyazi ukuba isantya sokuthengiselana sinempembelelo enkulu kwisicwangciso sokuthengiselana rhoqo. Ngokuqhelekileyo usebenzisa iVPS [...]
Februwari 22, 2022
Nge-EA enye elawula imiyalelo yenye i-EA, unokwenza oku.
Kwinkqubo yokusebenzisa urhwebo lwenkqubo, ngaba ukhe wadibana nemeko enjalo? Indawo yokuvula ye-aEA ingcono, kwaye indawo yokuvala ye-BEA ingcono. Kuya kulunga ukuba ezi zimbini EAs zinokudityaniswa kunye! Ngokuqhelekileyo, sisebenzisa i-1 EA ukuvula nokuvala izikhundla. Ukuba ndifuna ukuthetha […]
Februwari 21, 2022
Ngokumalunga nefayile yoqwalaselo lweparameter yorhwebo lweprogram, kwanele ukufunda eli nqaku
Isetyenziswa njani ifayile yoqwalaselo ye EA? Umsebenzisi ubesebenzisa i-Bang EA's Hedging EA kurhwebo olwahlukeneyo. Imisebenzi ye-software ye-EA ityetyiswa rhoqo. Njengoko ixesha lihamba, kukho amakhulu emisebenzi ye-EA, ngoko ke sebenzisa iimeko zephaneli ezenzekelayo ukuvula nokuvala izikhundla. Ngokomzekelo, kukho ezininzi […]
Februwari 18, 2022
Ngaba ii-odolo zokubuyisela umva amacebo okulahlekelwa zithembekile?
Ngethuba leminyaka yangaphambili ye-10 yokurhweba okufanisiweyo, isicwangciso sokurhweba rhoqo senza ilahleko ezizinzileyo, kwaye kwinkqubo, iqhutywe ngokungqongqo ngokwesicwangciso sayo sokurhweba. Kwimarike yexesha elizayo, amathuba okulahlekelwa ngokuqinisekileyo aphezulu kakhulu, kwaye anokuba yilahleko. Ukuba silandela isicwangciso sorhwebo kwi […]
Februwari 14, 2022
Ukurhweba kwe-EA ngokuzenzekelayo kugcina izikrini
Qaphela: Eli nqaku ligqithiselwe kwi-www.eabang.com. Eli nqaku yividiyo ebhalwe nguMnu. Tang. Kwabo bangakuthandiyo ukubukela iividiyo, unokufunda inqaku. Uzithatha njani ngokuzenzekelayo izikrini xa i-EA ivula kwaye ivala iiodolo? Lo msebenzi sisicelo esivela kwilungu le-EA. Ngokuqhelekileyo usebenzisa iitransekshini zeprogram. Une […]
Februwari 13, 2022
Uwuqonda njani umahluko phakathi kwebha yosuku kunye ne-macrocycle?
Umahluko uvela ikakhulu kwimilo yebha kumaxesha ahlukeneyo okulungisa. Njengoko kubonisiwe kumzobo ongezantsi, njengetshathi yomzuzu we-1 kunye netshathi yemihla ngemihla, ezininzi imigca ye-K kwitshathi yomzuzu-1 ingaba nenani elincinci le-TICKs. Ngexesha lexesha elingasebenziyo leentlobo ezithile ezingathandwayo, umzuzu omnye we-K-line uyaguquguquka […]
Yintoni endimele ndiyenze ukuba i-EA ayivali imiyalelo
1.Cofa ku "Thenga Vula" okanye "Thengisa Vula" kwiPhaneli yokuvula ukujonga ukuba kukho umyalelo ozaliswe.Ukuba akukho myalelo omtsha,Nceda ukhangele ukuba i-mt4 kunye ne-mt5 zingenisiwe, kwaye "i-Algo Trading" kwaye "Vumela ukuthunyelwa kwe-DLL ngaphandle" kuvuliwe. Ufakelo lwe-EA 2.Ukuba kukho iodolo entsha, ii-odolo ezingavalwanga azilawulwa, Indawo [...]
Hedg enye isimboli
Lo msebenzi usetyenziselwa iisimboli ezininzi. Emva kokuba i-Oall T / P kwiphaneli yokuvala iqhutywe, isixa senzuzo yayo ikhusela ilahleko elawulwa yi-EA ngowona myalelo mnye, kwaye ungakanani ukuvalwa; Pofit>0:Inzuzo yee-odolo ezimbini ezibiyelweyo inkulu kuno-0; Ilahleko yeakhawunti kufuneka>%:Ilahleko edadayo/iBanlence>5%.
Iforum izihloko zamva nje
Hedging EA v3.8.8.4 download kunye nokuhlaziya inkcazo yomsebenzi
Iiparamitha ezininzi zeempawu, sele zisebenza iinyanga ezi-5, kwaye inzuzo yi-50
Hedging EA v3.8.8.3 download kunye nokuhlaziya inkcazo yomsebenzi
Iyonke i-S/P isethingi yokuvala indawo yolawulo
Ukugcina umva kucotha kakhulu.
© 2022 BangEa. Yakhelwe usebenzisa iWordPress kunye Umxholo weColibriWP .